:: बुद्ध लामा पोखरामा, समर्थकले यस्तो गरे ! पोखरा झर्ने बित्तिकै बुद्धले यस्तो भने (भिडियो सहित)
बुद्ध लामा पोखरामा, समर्थकले यस्तो गरे ! पोखरा झर्ने बित्तिकै बुद्धले यस्तो भने (भिडियो सहित)
एपिवान टेलिभिजनद्धारा सञ्चालित चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ को ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश गरेका पोखरेली प्रतिभा गायक बुद्ध लामा मंगलबार पोखरा आएका छन् । बुद्धको पोखरामा भव्य स्वागत गरिएको ‘बुद्ध लामा जिताऔं’ अभियानका महासचिव मन क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
ग्राण्ड फिनाले प्रवेशपछि आफ्नो गृहनगर पोखरा झर्न लागेका बुद्धसंगै रियालिटी सो संग सम्वन्धित अन्य प्रतिनिधीसमेत छन् । फाइनल प्रतिष्प्रर्धामा आफ्नो लागि भोट अपिल तथा गृहनगरमा हुने उनको भव्य स्वागतको छायाङ्कन गर्न शो का प्रतिनीधि उनीसंगै पोखरा झरेका हुन् ।